The Lightpower Collection မှ Rock 'n' Roll ၏ ၂၀၁၁ NAMM ပြပွဲတွင်ဒဏ္Legာရီဓာတ်ပုံဆရာ Neal Preston ထံမှသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလများကိုပြသမည်။ NAB သတင်းများ | 2019 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆိုပါ 2019 NAMM Show မှာဒဏ္ဍာရီဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး Neal Preston ကနေရော့ခ် 'n' Roll ရဲ့ပုံစံလုပ်ရန်ခဏခင်းကျင်းပြပေးပါရန် Lightpower စုစည်းမှု
အဆိုပါ 2019 NAMM Show မှာဒဏ္ဍာရီဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး Neal Preston ကနေရော့ခ် 'n' Roll ရဲ့ပုံစံလုပ်ရန်ခဏခင်းကျင်းပြပေးပါရန် Lightpower စုစည်းမှု
Preston ရဲ့ထုတ်, နောက်ကွယ်မှကြိုးခံစားရဖို့စာအုပ်တွေနဲ့ NAMM ဖောင်ဒေးရှင်းမှပရဟိတလုပ်ငန်းရောင်းချမှုမှရရှိသော
ကျော်ကြားတဲ့ရော့ခ် 'n' လိပ်ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့စာရေးဆရာ Neal Preston ရော့ခ်ရဲ့အအရှိဆုံးအဓိကအချိန်လေးနှင့်ဂီတနဲ့ pop ယဉ်ကျေးမှုသတ်မှတ်ကြသူကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖမ်းယူဆယ်စုနှစ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ 40 နှစ်ကျော်အဘို့, Preston အခြားသူတွေအကြား Led Zeppelin, အဆိုပါအဘယ်သူဘုရင်မ, Fleetwood, Mac, ဘရုစ် Springsteen ၏အကြိုက်နှင့်အတူခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တီဗီနှင့်ရုပ်ရှင်၌မိမိလုပ်ဆောင်သောအားဖြင့်, ဂီတဓာတ်ပုံများတွင်အကြီးဆုံးနှင့်ဒဏ္ဍာရီမော်ကွန်းတိုက်၏တဦးတည်းသုံးခဲ့ဖူး ။ ဤဓာတ်ပုံစုဆောင်းခြင်း, ကမ္ဘာကြီးကိုခရီးထွက်နှင့်မိတ်ဆက်ပြသဂျာမနီ, ဆွီဒင်, ဆွစ်ဇာလန်, ယခုအခါယင်း timeless ပုံရိပ်တွေအဆိုပါ 2019 NAMM ပြရန်၎င်းတို့၏လမ်းဖြစ်စေလျက်, Anaheim အတွက်ဂီတပစ္စည်းများ, လိုလားသူအသံနှင့်ဖြစ်ရပ်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းဆုံထားပါတယ် ကယ်လီဖိုးနီးယား, ဇန်နဝါရီလ 24-27 ။
အဆိုပါ NAMM Show မှာ, အ Lightpower ငွေကောက်ခံဒဏ္ဍာရီအယ်လ်ဘမ်အဖုံးများ, နောက်ကွယ်မှအမြင်များ, သမိုင်းဖွဲ့သောအချိန်လေး spanning သည်သူ၏အထင်ကရပုံ 50 ထက်ပို featuring, အလုပ်၏ Preston ရဲ့ကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေမှာပါတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ် - ရော့ခ်၏အနှစ်သာရ 'n' လိပ် နှင့်ဖျော်ဖြေပွဲ Tour ။
အဆိုပါ Lightpower ငွေကောက်ခံဟန်ပြနှစ်ခုသီးခြားနယ်ပယ်များတွင်တည်ရှိသောနှစ်ယောက် themes များအပေါ်ယူလိမ့်မည်။ ပထမဦးဆုံးဧရိယာဟာ NAMM အဖွဲ့ဝင်စင်တာ (ပု Anaheim ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၏ဧည့်ခန်း) မှာတည်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Lightpower နှင့်ဂီတပြုလုပ်ခြင်း၏ NAMM ရဲ့ပြတိုက်ဖြင့်တာဝန်ယူထားသော Preston ကနေအများဆုံးအထင်ကရနှင့်စဉျးစားစရာပုံရိပ်, feature ပါလိမ့်မယ်။ အခြားတည်နေရာခန်းမတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည် - နောက်ကွယ်မှာ-The-ပြကွက်များတဲမှာ။ အဆိုပါပြခန်းကိုခင်းကျင်းပြသတီးဝိုင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကခရီးစဉ်ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ် Preston ရဲ့အချိန်ကနေဘုရင်မကြီး, Freddie မာကျူရီအဖြစ် Led Zeppelin ၏ကို select လုပ်ပါရိုက်ချက်များကြီးစွာသောနှောင်းပိုင်း frontman ၏-မတိုင်ခင်ဘယ်တော့မှ-မြင်ကြသုံးခုအပါအဝင်ပုံရိပ်တွေတစ်စုဆောင်းခြင်း, feature ပါလိမ့်မယ်။
မိမိအအကျော်ကြားဆုံး၏ပုံနှိပ်နှင့်ကောင်းစွာ-ချစ်ရသူဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူ display တွေ, Preston ရဲ့စာအုပ်တွေတစ်ရွေးချယ်ရေး, "အိပ်ဇောရတာဟာ" နဲ့ "Rock'n'Roll ဟာရီကိန်း၏မျက်လုံးခုနှစ်တွင်" အပြင်ရောင်းချမှုအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အားလုံးအရောင်း, နောက်ကွယ်မှဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များမှစက်ချုပ်ထောက်ပံ့ငွေကိုထောက်ပံ့ပေး, ဒါမှမဟုတ်အပြင်းအထန်နေမကောင်းသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရနေသော၎င်းတို့၏ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များ, သောမေတ္တာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်။ ရရှိသောလည်းသိပ္ပံနည်းကျသုတေသန, ပရဟိတပေးကမျးနှင့်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်သက်တမ်းတစ်လျှောက်အောင်ဂီတအတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်တိုးဖို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သော NAMM ဖောင်ဒေးရှင်းရန်ပုံငွေကူညီပေးပါမည်။
Preston ရဲ့အလုပ် Lightpower မှစ. , Lightpower ငွေကောက်ခံ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Lightpower တစ်အလင်းရောင်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဂျာမနီမှာ 1978 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. Lightpower ဇာတ်စင်နှင့်စတူဒီယိုအလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်နိုင်ငံတကာတွင်ထူထောင်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Lightpower ငွေကောက်ခံရော့ခ် 'n' လိပ်အနုပညာစုဆောင်းများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်စိုက်ပျိုးထားပြီးတဲ့ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုထဲကမွေးဖွားခဲ့သည်။ စုဆောင်းခြင်းကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးဓာတ်ပုံဆရာနှင့်ဒီဇိုင်နာများအများအပြားထဲကနေဓာတ်ပုံနှင့်အယ်လ်ဘမ်အဖုံးအနုပညာလက်ရာများပါရှိပါတယ်။
အဆိုပါ 2019 NAMM ပြရန်, ဂီတတူရိယာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုရုံးလမ်းဆုံ, လိုလားသူအသံနှင့်ဖြစ်ရပ်နည်းပညာများစက်မှုလုပ်ငန်းများ, Anaheim ကယ်လီဖိုးနီးယားဇန်နဝါရီလ 24-27 ပြန်လည်ရောက်ရှိနှင့် 130 နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများကျော်ထံမှတက်ရောက်ကြိုဆိုပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းယခုသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်အဆိုပါ NAMM ပြရန်အဘို့အဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ် www.namm.org
Neal Preston အကြောင်း
Preston ရဲ့ဒဏ္ဍာရီဂီတပုံရိပ်တွေအစဉ်အဆက်ရော့ခ်ရဲ့အများဆုံးအထင်ကရကြယ်ကိုဖန်ဆင်းအရှိဆုံးအမှတ်ရစရာအချို့ပါဝင်သည်။ မိမိအဓာတ်ပုံတွေတိုင်းစိတ်ကူးမီဒီယာထွက်ပေါက်၌ထငျရှားပြီကမ္ဘာ့အဆင့်မီမဂ္ဂဇင်းနှင့်သတင်းစာများရဲ့အဖုံးများနှင့်စာမကျြနှာပျေါတှငျ, စာအုပ်တွေ, ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Broadway show ကိုအစီအစဉ်များနှင့်လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်, ဗီနိုင်း, CD ကိုနှင့် DVD ကို packages များမှ ... စာသားနေရာတိုင်း။ မိမိအ client ကိုစာရင်းတစ်ဦးကို virtual who's သူရော့ခ်မူပိုင်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိအ archive ကိုလေးကျော်ဆယ်စုနှစ် spanning အလုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်, ဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောဓာတ်ပုံကို collection များကိုတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ဒါဟာ 1 ဖြစ်စဉ်များတွင်အသုံးပြုတထောင်တချက်နေဆဲဓာတ်ပုံများပေး, VH-50 ရဲ့ကောင်းချီးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီးရီး "တေးဂီတနောက်ကွယ်မှာ" အတွက်ဓာတ်ပုံတွေ၏သော့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရော့ခ်ဂီတပရိတ်သတ်တွေကအကောင်းဆုံး Led Zeppelin, အဆိုပါအဘယ်သူဘုရင်မ, Fleetwood, Mac, ဘရုစ် Springsteen နှင့်မရေမတွက်နိုင်တဲ့တခြားသူတွေနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်ခဲ့သူဒဏ္ဍာရီဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ် Preston သိကြ၏။ 1985 ခုနှစ်, Preston လန်ဒန်ရဲ့လေကွင်းကွင်းမှာဘော့ Geldof ရဲ့ "တိုက်ရိုက် Aid" ကိုဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်တရားဝင်ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ 1988 ခုနှစ်တွင်ဘရုစ် Springsteen နဲ့သူ့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ခရီးစဉ်နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၏မြေမှတ်တိုင်ကို "မျှော်လင့်ခြင်း၏ကွံ" အတွက်တာဝန်ရှိသူတဦးကခရီးစဉ်ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ်သူ့ကိုအလုပ်ဆင်းသက်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဘေးဖယ်ဂီတရဲ့အရေးအပါဆုံးဓာတ်ပုံဆရာတဦးအဖြစ်သူ၏အထက်တန်းလွှာအဆင့်အတန်းကနေ Neal Preston ရိုက်ကူးဂီတသမားထက်အများကြီးပိုပြုမိခဲ့သည်။ သူလည်းသူကယူနစ်နှင့်အင်္ဂါရပ်များအတွက်အထူးဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရာများအတွက်ပါရမီရှင်အားကစားဓာတ်ပုံဆရာ, ပြည်သူ့မဂ္ဂဇင်း၏သမိုငျးတှငျအမြားဆုံး-တာဝန်ပေးအပ်ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်နီးပါး 700 ရိုက်ကူးရက်ပေါင်းနဲ့သူ့ရဲ့အကြွေးဖို့, နိုင်ငံတကာရိုက်ကူးရေးအစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် "နီးပါးနာမည်ကြီး" နှင့်တူသောရုပ်ရှင် "Vanilla က Sky ။ "
BOXX သည် GTC Digital တွင် NVIDIA စွမ်းအင်သုံး Data Center စနစ်နှင့်အခြားအရာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် - မတ်လ 26, 2020
တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် 2018-12-31
ယခင်: Roland သည် Chris Wissinger နှင့်အတူဗီဒီယိုထုတ်ကုန်အသင်းတိုးချဲ့သည်